ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: "Permit to mourn"
ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကို လေးစားပါတယ် ။ စလုံးလို နေရာမျိုးမှာ အားတဲ့ အချိန်လေးမှာ အနားမယူကြပဲ လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာကို နားလည်လက်ခံ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြသူတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါရေ...တချို့တချို့တွေကျတော့လည်း ....အင်း.....ခက်တယ်ဗျာ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ။ ပြောပြန်ရင်လည်း အပိုင်း ၂ ကို စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ် ။
ရွာစားရေ… အပိုင်း (၂) လာပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကြားထဲမှာ ကျနော်ရေးချင်တဲ့ ပို့စ် တခုနှစ်ခု ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒါတွေ ပြီးရင် လာမယ်။ သီတင်းပတ်ကုန်လောက်ပေါ့။း-)
ဖယောင်တိုင် ရွာစားကြီး.. အဲလေ... တော်လိုက်တာ ကိုပေါရယ်...
နောက်ဆို အဲလို လူလူသူသူလေးတွေလုပ် ကြားလား... ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပတ်မဆဲနဲ့.... ပတ်ဝန်းကျင်က မင့်------- မဟုတ်ဘူး....
ဒီပို့စ်က အဟောင်းပဲ။ မြန်မာလိုကတော့ ဖတ်ပြီးသားပါ။
မြန်မာလို ရေးထားတာ နောက်တကြိမ်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်လို အရေးအသားကလည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တူညီတဲ့ ခံစားမှုရသ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ရွာစားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို လေးစားပါတယ်။
ပြောပြန်ရင်လည်း အပိုင်း ၂ ကို မျှော်ပါမယ်။
ဘယ်လို ရေးသား တင်ပြဦးမယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဗျာ။
နောက်ထပ် ရေးမှာတွေကိုလည်း အားပေးပါဦးမယ်။
အရင်တုန်းကတော့ Comment မရေးခဲ့ဘူး။ ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ခဲ့တယ်။
ဟိုနေ့ကတင်တဲ့ "ပြောပြန်ရင်လည်း" မတိုင်ခင်အထိ ကျွန်တော်က အဖတ်သမားသက်သက်ပဲ။
အခုတော့ အဆင်ပြေရင် ပြေသလို ဝင်ပြီး Comment ရေးပါမယ်ဗျာ။
ငပေါကြီးက လက်စသတ်တော့ ဒီဂွင်ဆင်တာကိုး
ငါလုပ်တာ ကွ ငါလုပ်တာ ငါလုပ်တာ ဒါမျိုးကွ ဆိုတာမျိုး လူစည်မှ ဖင်က ပေါက်ဖူးတဲ့ ၀ဲခြောက်လှန်ပြတာပဲ ဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
ငပေါရေ မြန်မာလို ရယ်သွားတယ် ၀ါးဟားဟား
မင့် အင်္ဂလိပ်စာကလဲ သောက်ရမ်းကို ညံ့ဖျင်းလိုက်တာ ။. ဒီလိုပုံနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို မူတ်ပြချင်သေးတယ်.
အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ မူတ်ချက်ကတော့ တလွဲချည်းပဲ ငပေါကြီးရာ
ကဲကဲ မဒမ်ပေါရေ မင်းလင့် ဆေးမှန်မှန်တိုက်ပါကွယ် ဆ၇ာဝန်ပေးထားတဲ့ ဆေးညွန်းအတိုင်းလဲ တိုက်ဦး
ဆက်ကြွားကြပါ.... ကျမတို့ကတော့.... မြန်မာတော်လှန်ရေးဆိုရင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပါပြီ....
ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင် မြန်မာပြည်ကလာတာချည်းပါပဲ... စလုံးကမှ မြန်မာ တွေဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး...
ဘေးကကြည့်နေသူတွေ အတွက်ကတော့ ရီစရာကြီးပဲ..
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ တော့ သေချာကို ကြည့်နေပါမယ်ရှင်....
ကော်မန့် တော့ဘယ်တော့မှ မရေးတော့ပါဘူး...
Anonymous (June 10, 2009 1:11 PM ) ….. အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်း တန်ဘိုးရှိတဲ့ ကော်မန့်တွေကို ထားရစ်ခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ် ကိုပေါ... ကျမက ကျန်တဲ့သူနှစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ဘုရားအဆူဆူ နဲ့ကြိမ်ပြောရဲပါတယ်...
ကိုပေါဟာ မရေမရာ ရမ်သမ်းတတ်တဲ့သူတယောက်ပဲ ထောက်ခံတဲ့ သူတွေကလဲ လူရမ်းကားတွေပဲ ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ....
ဒါလေးတွေ တတ်ထားပြီး သေချာမှာလူတွေကို စွပ်စွဲဘို့ အကြံပေးလိုပါတယ်...
ကျမကို မင်းနဲ့ ရွာစားကြီးတို့နဲ့ တူတူပဲလို့စွပ်စွဲတဲ့ ကော်မန့်လေးပြန်တင်ပေးပါရှင့်... ကိုယ့်တံတွေးကိုယ် မမြိုတတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ..
ဒီမှာလာပြီးကော်မန့် ရေးကြသူတွေက တယောက် (သို့) နှစ်ယောက်ထက်မပိုဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ကိုပေါနဲ့ အပေါင်းအပါများ ရေ... ကျမဘယ်တော့မှ မရေးတော့ပါဘူး..ဒါနောက်ဆုံးပါဘဲ... ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါ... စိတ်ပျက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်..
ရွာစားကြီး လို့ သတ်ပုံတလွဲနဲ့ ရေးတဲ့ အနောနီးမတ်နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောတာပါ။ မြန်မာစာကို သေသေချာချာ မဖတ်တတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ ဒီမှာ နောက်ထပ် သတ်ပုံတလွဲ (ကြီး လို့ရေးတာ)တူတဲ့ နောက်တယောက်ကို ထပ်ထည့်နေတာ မပြီးသေးလို့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ အခုတော့ အဲဗြာတောင်းဆိုတဲ့အတွက် မထည့်တော့ဘူး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။း-)
အဲဗြာက စကားကို အမျိုးမျိုး ဗလောင်းဗလဲ ပြောတတ်ပုံမရဘူး ဆိုတာတော့ ကျိန်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ စောစောလေးကတင်ပဲ ကျမ ကွန်မင့်ဘယ်တော့မှ မရေးတော့ပါဘူး ပြောတဲ့ အဲဗြာနဲ့ရော တူသလား။ တယောက်တည်းပဲလား။ သိချင်ပါတယ်။း-)
အပေါ်က ကွန်မင့်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဲဗြာအနေနဲ့ ကိုယ့်တံတွေးကိုယ်ပြန်မျိုပြီး ကွန်မင့်နောက်တခုလောက် ထပ်ရေးချင်ရေးပါ။ ကျနော်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်…. နောက်ထပ် နာမည်တခု ပြောင်းရေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။း-)
ကိုပေါက မိန်းမကောင်းလျှာပါးရန်တွေ့တော့လဲ ပြောရတာပေါ့ရှင်... ကျမကိုစွပ်စွဲတဲ့စာကြီး တွေ့မှတော့ မရေးပဲနေမလားရှင်... အဲဒီကော်မန့်ကို တင်မှာသာတင်စမ်းပါ.. သတ္တိခဲကြီး၇ယ်..
အမှန်အတိုင်း တလု့းမှမလွဲစေနှဲုနော်.. ရှင်ေ၇းတဲ့စာရှင်မှတ်မိမှာပေါ့... ဘယ်သူသိသိမသိသိ ကျမတော့ သိတယ်ရှင့် ရှင် နာမည်ကောင်းယူပြီးအော်ဟစ်နေလဲ အောဂလီဆန်တဲ့ စိတ်နဲ့ ကြည့်နေတဲ့ သူတယောက်ရှိနေတယ် ဆိုတာ သေတဲ့ အထိမှတ်ထားပေတော့
ဒါတွေဖျက်ဘို့ မကြိုးစားနဲ့နော် စကရင် ရှော့ ရိုက်ထားပြီးပြီ..
ကဲပါ….. ကတိမတည်တဲ့ အဲဗြာ… စကားကို ဗလောင်းဗလဲ အမျိုးမျိုးပြောတတ်တဲ့ Flip Flop အဲဗြာရယ်…. ပြန်တင်ပေးဆိုလည်း ပြန်တင်ပါ့မယ်။ ရရစ်အသုံးမှားပုံ တူနေတဲ့ ပေါဘောမ ကိုပါ ထည့်နေရလို့ပါ။ ဟုတ်ပြီးလား။
Min ရဲ့ “ငပေါကြီး”…. ရေးပုံ၊
ရရစ်လုံးကြီးတင်ဆံခတ်ကို တလွဲရိုက်ပုံတွေကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တူနေပါလား။ တယောက်တည်းမဟုတ်ရင်တော့ လက်နှိပ်စက်သင်တန်း တတန်းတည်းထွက်တွေထင်ပါ့။…..း-)
အမှန်က သည်လို ရေးပါတယ်။ “ကြီး”
Nga Htin said...
Ko Paw likes to quarrel with others and likes to blame others. Ko Paw is Pessimist. ဟုတ်လား? အဟိ :P
ကိုပေါ ... ကိုပေါ.... ရွံ့စရာကြာလေကောင်းလေပဲ...
ကဲပါ….. ကတိမတည်တဲ့ အဲဗြာ… စကားကို ဗလောင်းဗလဲ အမျိုးမျိုးပြောတတ်တဲ့ Flip Flop အဲဗြာရယ်..
မိန်းမကောင်းရန်တွေ့ ကိုပေါ... နင့်ကိုအထင်မကြီးဘူး ဆိုတာပဲပြောခဲ့မယ်.... ကျန်တာ ဟုတ်မဟုတ်... နငိ့ကိုယ်စောင့်နတ်သိတယ်...
လူစည်မှ ဖင်က ပေါက်ဖူးတဲ့ ၀ဲခြောက်လှန်ပြတာပဲ ..........ဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
မဒမ်ပေါရေ မင်းလင့် ဆေးမှန်မှန်တိုက်ပါကွယ်....
"ငါမှသိ ၊ ငါမှတတ် ၊ ငါ့ကို ဝေဖန်ရင် နည်းနည်းမှသည်းမခံ ၊ ငါနဲ.အမြင်မတူရင် ငါ့ရန်သူ ၊ ငါရေးချင်တာငါရေးမယ် ၊
ဘလောက်လာဖတ်တဲ့ ပရိသတ်ကို စော်ကားရရင် ငါ့အတွက် အမြတ်" ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ.....
ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေလျှောက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမနေပါနဲ.တော့ ။ .......
ငါးစိမ်းတန်းသွားပြီး ငါးစိမ်းရောင်းစားရင်တော့ သေချာပေါက်ကြီးပွါးမှာပါ .... ငပေါရေ ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗန်းမော်ဆရာတော် တို့ကို အသာထား ....
ဗုဒ္ဓ ကိုတောင်ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲထဲ့ ကိုးကား နိုင်တဲ့ ပေါကြီးပါ။ ...
ဘာတွေ ဟုတ်မဟုတ်ကို ကျနော့်ကိုယ်စောင့်နတ်က သိရမှာလဲ အဲဗြာရယ်။ နည်းနည်းလောက် လင်းစမ်းပါဦး။
ကျနော်ကတော့ ကွန်မင့်ရေးတာ ဒီတခါ နောက်ဆုံးပဲလို့ နှစ်ကြိမ်တိတိရေးပြီး စိတ်မပြတ်နိုင်ရှာတဲ့ မအဲဗြာရဲ့ အဖြစ်သနစ်ကိုလည်း နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေးနေပါတယ်။
ဆန္ဒရှိသေးရင် နောက်တကြိမ် ထပ်ရေးပါဦး။ အခြားနာမည် တခုခုနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ငပေါကြီးရယ် ငပေါကြီးရယ် ငပေါကြီးရဲ့
မင်းနှယ့်ဟယ် တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း သောက်လုပ်မလုပ် မင်းကြံထားတဲ့ လူစည်အောင် လုပ်ထားရတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ငါကွ ငါကွ ဆိုပြီး မြူးပြီး ကော်မန့်ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ထင်တယ်
ငါ့မလဲ အလုပ်မပြီးသေးဘူး ငါ့ မယားပါသားလေးကို ဆေးသောက်ပြီးပြီလား ပြန်လာကြည့်တော့ မင်းဟာက သူများတွေကို လိုက် စွတ်စွဲ ထားတာပဲ မင်း ဆိုတာ မင်းပထွေး ငါပါကွ.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တောင် ကက်ကက်လန် ရန်တွေ့နေတာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပါပြီ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကန္ဒားစီး ပေါပေါကြီးကလဲဟယ် မင့်နှယ်..စိတ်ကို ညစ်ရော..
မင်းနဲ့မျိုးမြင့်မောင်ကို သူထိ ငါနာ ငါ့ထိ သူနာဖြစ်နေပါတယ် မှတ်တာ မဟုတ်မှလွဲရော မဟုတ်မှလွဲရော....မဒမ်ပေါနဲ့ မျိုးမြင့်မောင်က လင်ညီအစ်မတွေထင်တယ်
ကျိန်းသေတာတော့ ငပေါရယ် မင်းတို့စလုံးမှာက ဆန္ဒပြတာပဲ အထူးအဆန်းလုပ်ရေးမနေနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း နည်းနည်း ကြည့်ဦး ရှက်စရာကြီး
မင်းဟာကလည်း သောက်ကြွားကလဲ ထူလိုက်သေးတယ် အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာလည်း သောက်ရမ်းကို ညံ့တယ်ဟာ စလုံးမှာ ဘယ်နေရာ အလုပ်လုပ်လဲ မသိဘူး ပြန်လာခဲ့ဦးမယ် သိလား ငပေါ မင်းအိမ်လာရတာ ပြည်ကြီးတန်ဆာ အိမ်ကို မင်းသားတွေ လာအပမ်းဖြေသလိုပေါ့ကွယ် ဟဲဟဲ
See! Ko Paw is damn proud now. He thought that peoples love his blog so much and givealot of comments. heehee...
Now I am here standby just to read the comments and post some comment back to blog's owner. khwee khwee..
Ko Paw, don't you think that all your intension is swaying in this way? Why don't you changeabit?
သွားပြီ... ငါတို့ ချွေးနှဲစာထဲကနေ ခြစ်ခြုတ်ပြီး သံရုံးမှာ ပေးဆောင်ချင်လွန်းလို့ ရှိခိုးဦးတင် အောက်ကျို့ပြီး လျှောက်လွှာရေး၊
(သံရုံးကို ရှိခိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ ငပေါဝန်ခံပြီ)
ကြည်ဖြူစွာ ပေးဆောင်ထားတဲ့ အခွန်တွေတော့ (ထပ်ဝန်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ ကြည်ဖြူစွာပေးခဲ့တာပါတဲ့ အရင်ပို့စ်မှာတော့ အခွန်ကိစ္စ သူပဲ ချီးပေါက်ခဲ့တာပါ)
လေပြင်းထဲမှာ ပေါက်မိတဲ့ အီးတလုံး လို သဲလွန်စမကျန်ဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားရော့မယ်လို့... ကျနော် ရုတ်ချည်းပူပန်သွားတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူအုပ်က ဆက်လက်ကြီးထွားလာပြီး ..(အားဆေးတန်ခိုး)။
။ဆုတောင်းကြတဲ့အထဲမှာ နအဖ ကြီး အမြန်ဆုံးပြုတ်ကျပါစေ (အပေါ်က)ဆိုတာလည်း ပါတယ်။
( စာအရေးအသားကတော့ တကယ့်ကို မော်ဒန်ပါပဲခင်ဗျာ စာမတတ်ကြောင်း သရုပ်ပီပြင်လွန်းလှပါတယ် )
ကဲ ငါ့မယားသားလေး အဖေ ခဏပြန်မယ် ပြန်လာခဲ့ဦးမယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ တွေ မွေးလာကတည်းက တိုင်းပြည်မှာ သာတူညီမျှ ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကို မခံစားခဲ့ရတာ ခုချိန်ထိပဲ။ လူတိုင်းမှာ ဒီအခွင့်အရေး ရှိသင့်တယ်..။ ဒါကို နားလည်ခံစားပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေကို ဘာကြောင့် အဆိုးမြင် ပုတ်ခတ်နေချင်ကြတာလဲ။ လူတယောက်ကို နာအောင်ပြောတာထက် ကောင်းအောင်ပြောတာ ပိုခက်နေလို့ လား....။ လူတယောက်ကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း နှိပ်ကွပ်နေတာထက် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တိုင်ပင်ဖို့ က ပိုခက်နေလို့ လား...။ လူတယောက်ရဲ့ အမြင်ကို မျက်စိပိတ် နားပိတ်ပြီး ဘူးခံငြင်းနေတာထက် သိမြင်နားလည်ဖို့ က ပိုခက်နေလို့ လား...။ အဲလိုသာ ဆိုရင် ခင်များတို့လူဖြစ်ရတာ ဘာတန်ဖိုးရှိလို့ လဲ..။ ခင်များတို့မိဘတွေအပေါ် ခင်များတို့လုပ်ရပ်က ဘယ်လောက်တောင် ကျေးဇူးကန်းနေပြီလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိသလား..။ ခင်များတို့ဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ ခင်များတို့ လိပ်ပြာကတော့ ခင်များတို့သမိုင်းအကြောင်း အမှန်တွေပဲ ရေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့ ....။
ဪ .ကိုပေါ ဆိုတဲ့ နာမည်ထက်ပေါတဲ့နံမယ် တခုရွေးပေး ဖို့ တော့ လိုနေပြီထင်တယ် ငပေါ ရာ ။
သောက်ရူးပေါ ၊ စောက်ရမ်းပေါ ၊ သောက်ရှက်ကမ်းကုန်ပေါ ၊ ကိုယ့် နှမပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းပေါ ။ကိုယ့်မအေ ကိုယ်ပြန် လှန်ပြပေါ ။
အဲဒါတွေ နဲ့ မလုံလောက်သေးရင် ထပ်ပြော ။ နံမယ်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ပေးအုံးမယ် ။
ဘယ်ကျောင်းတော်ကြီးက နေ အင်ဂျင်နီယာ ပညာတွေ တတ်လာတာလဲဟ ။
သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာတွေမှ အားမနာ။ လျှာရိုးမရှိတိုင်း ထင်တာပြော နေတဲ့ ငပေါ ရေ။
မင့် ဂျီးဒေါ်လဲ မင်းပြန်ကြည့်အုံးကွ ။ မင်းမိဘ တွေ ဆို တံတွေးခွက်ထဲ လက်ပစ်ကူး နေရတာ တောင် ရှက်လွန်းလို့တဲ့ ကွာ။
အစတော့ ဟုတ်မလို နဲ့ မင့် ဦးနှောက် အေ ကိုက် သွားပြီလားကွ ။
ဒါဆိုလဲ မင့်အတွက် အချိန် သိပ် မကျန်တော့ဘူး ။ ဘဝကူးလေးကောင်းအောင် လုပ်အုံးဟ ။
ဝါးလုံးချီးသုတ်ပြီး ရမ်းပြီး အရူးချီးပန်း တွေ လုပ်ရမဲ့ အချိန် မဟုတ်တော့ဘူး ဟ။
အေကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ မဒမ် ပေါ ခမျာလဲ နောက်ပိုင်းမှာ စောင်မ ကြည့်ရှု မဲ့ သူတောင် ရှိမယ် မထင်ဘူးဟ။
မင်းအတွက် ဘုန်းကြီးတော့ ပင့်ပေးပါ့မယ်ကွာ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်ထဲ မဖွယ်မရာနဲ့လှဲပြ အိပ်ပြ မနေပါနဲ့ တော့ကွာ ။
King of paw said...
ဘိုလိုမှုတ်တာလား ဒါ အော် ဒါဘိုလိုမှုတ်တာ မြန်မာလိုလည်းမှုတ်တယ်လား နေအုံးစကားမစပ် ဒါဆောင်းပါးလား ဒီလိုဆောင်းပါးကို ဒီတစ်ခါပဲ မြင်ဖူးတယ်ခင်ဗျ တမျိုးကြီးပဲ ပုံပြင်လိုလို ၃ပုဒ် ၁ကျပ် ၀တ္ထုလိုလို မှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျ လေးစားပါတယ်ခင်ဗျား ဒါပေမယ့် ထပ်မေးအုံးမယ် ဒါဆောင်းပါးနော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆောင်းပါးကိုး အော် ဒါဆောင်းပါးတဲ့ အင်း အင်း အင်း... ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် စိတ်ပျက်ဖို့ ဟဲဟဲ တော်ဘီဗျာ တောက်တလွဲတွေကြီးပဲ ပြန်တော့မယ်နော် ဟိဟိ ဒါနဲ့ ဒါဆောင်းပါးနော် အင်းဟင်းဟင်း
korea မှာ ဆန္ဒပြတာ ကိုပေါမြင်လားမသိဘူး တစ်ယောက်ချင်းစီထွက်ဆန္ဒပြတာလေ ၄ ယောက်တန်းစီတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော် ဘေးကလည်း မဒမ်ပေါရယ် မျိုးဖင်ပြောင်ရယ် နောက်မြန်မာတစ်ယောက်ရယ် အဟဲ သတ္တိပြောင်တယ်နော် ဘိုင်ဘိုင် ဘေဘီ ဟဲ ဆက်ရေး ဆက်ရေး
KING of the paw
U should think about urself.
ဟိုဖက်မှာ “ပတ်ကြမ်း” တိုက်ခဲ့တာလေ...
ဒီတော့ “မျက်ဖြေ ရတု” ဖန်တီးကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာ.
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ “ကိုယ်ရည်သွေး” လေးပေါ့ဗျာ...
--->ရိုစာပါ့ခ်၊ မာတင်လူသာကင်း၊ မဟတ္တမဂန္ဒီ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စတဲ့<---
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်ထဲဘဲ မှီတယ်ဗျာ. (ရှေ့မှီနောက်မှီ ပက်လက်ကုလားထိုင်ကြီး) ခင်ဗျားဘဲ ရွှီး ပေတော့..
ခင်ဗျားဘဲ မတရားတာဆိုရင် “ဆော်”မယ်ဆို ရှေ့နေ ငှားပြီး “စ” လုံး အစိုးရကို (မောင်းထုတ်ခံ ရတဲ့ သူတွေကိုယ်စား) တရားစွဲ လေဗျာ. လုပ်လေ. ချလေဗျာ.
နေညိုရင့်...အခု ပိုစ့် ကျမှ ဘယ်ချောင်က ထလာပြီး ရွှေပြည်အေး တရားဟောနေတာတုန်း. အေးဆေးပြန်အိပ်နေစမ်းပါ.......။
Ko Paw, dn't waste time and pls ignore the stupid guys showing their standard by using abusive remarks. we hope to read more positive and constructive post instead of violating to others right.
So why you come here ! A/w (Ngaman)
ဆိုတဲ့ မိန်းမကြီး. ဘာကြောင့် ဆဲနေလဲသိချင်ရင်
Still got some waste life-followers..
ငမိုက်သား ငပေါ မလိမ်မာလို့ ငပေါပထွေးတွေနဲ့ ငပေါယောက်ဖတွေက ဆုံးမနေတာကို
ငပေါလင်တွေက စအိုတွန့်ပြီး ၀င်နာနေပြန်ပါပြီ
သူ့ရဲ့(နှုတ်) စအိုလို တွန့်လို့
Readers တွေ မျက်မာန်ရှတယ်
ငပေါလင် နင့်ဖင် တွန့်လို့
ကော်မန့်တွေပွတ်ကြတယ် နင့်အဖေ ငါပဲ..ဗြဲ..
“ကျမတို့ကို နေရာတိုင်းမှာ မေးကြတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ။ အန်အယ်ဒီပါတီက ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ။ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းကြတယ်။ ကျမတို့ကလည်း အခုလိုမေးတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ရှင်တို့တတွေကကော အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေများ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …” တဲ့။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
"တိုင်းပြည်ဆီက သင် ဘာတွေ ရမလဲလို့ မမေးပါနဲ့ တဲ့။ တိုင်းပြည်အတွက် သင်က ဘာတွေ ပေးဆပ်မည်လဲဆိုတာကို ဖြေကြားပါ" (ကနေဒီ)
ကိုယ်မပါရင် Forget it ဟေ့!!!
ဒီဘလော့မှာထမိန်ခြုံပြီး အမည်မဖော်ရဲသူတွေ လက်သီးပုန်း တော်တော်ပြတာဘဲ မကျေနပ်ရင် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ငြင်းပေါ့ လက်ခံတာ မခံတာ မောင်ပေါအပိုင်း ဒုံးဝေးတယ်ထင်ရင် မဖတ်နဲ့ပေါ့ အလကားလျှောက်အော်နေတယ်
Fully support to Soe Soe's (June 11, 2009 5:55 AM) comment. I understanding they showed their bad attitude here.
soe soe -> Profile မရှိတဲ့ မင်းကတော့ ပုဆိုးချုံထဲက လက်သီးပြတာကို ထမိန်လှန် ရန်တွေ့နေတယ်ပေါ့..ကျလှတော့တယ်
Anonyouus(supporteer of Soe Soe June 11, 2009 5:55 AM)->We do really no ur attitude too, so shut the f**k up.
P.s..လက်ရှိ စ လုံးအစိုးရရဲ့အတိုက်အခံ တွေကလျှော်ကြေးပေး ထားလို့ ဆန္ဒပြခွင့်ရတာကို “ပေါတတ်ပလေ” ကြောင့် ဆန္ဒပြ ရသလိုလို နဲ့ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပြ နေသေး..
ငဒို့ရွာစားတွေ မြင်နေရ ၊ ကြားနေရတာတွေကတော့ ကြားရ ကြားရ နားဝ မသက်သာ ဆိုသလိုပါပဲလားကွယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲ ပြောပြော အပျင်းတော့ ပြေသဟေ့ (ကွန်မင့်တွေ ဖတ်ရတာ ပြောပါတယ် ) Min ဆိုတဲ့ သူကောင်းသားကို တောင်းဆိုချင်တာ တခုရှိသဟေ့ ။ ငဒို့ရွာစားတွေကတော့ အသုံးလုံးတောင် မနည်းကြိုးစားမှ အောင်လာတာ ဆိုတော့ သိုးဆောင်းလို တော့ နကန်းတလုံးမှ မတတ်ပေါင် ။ သို့ပေမယ့် ကိုပေါ က သိုးဆောင်းလိုရေးပြတာ တွေ့လိုက်ရတော့ မဖတ်တတ်ပေမယ့် အထင်တော့ ကြီးမိသား ။ အဲဒီတော့ကာ အနှီ Min ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အဆိုအရ ကိုပေါရဲ့ သိုးဆောင်းဘာသာဆောင်းပါးဟာ အတော်လေး မှားယွင်း ၊ ညံ့ဖျင်းနေတယ်လို့ မှတ်ယူရမလိုဖြစ်နေတော့သပေါ့ ။
***မင့် အင်္ဂလိပ်စာကလဲ သောက်ရမ်းကို ညံ့ဖျင်းလိုက်တာ ။. ဒီလိုပုံနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို မူတ်ပြချင်သေးတယ်.
အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ မူတ်ချက်ကတော့ တလွဲချည်းပဲ ငပေါကြီးရာ *** ကိုပေါ ရဲ့ သိုးဆောင်းဘာသာ နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို အမှားတွေ ပြင်ဆင်ထောက်ပြပြီး သူ့ထက်သာလွန်အောင် သိုးဆောင်းလို ရေးသားပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ငဒို့ ရွာစားတွေက အတော်လေးကို အထင်ကြီးလေးစားမိမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း......
Hi everyone, this is the one of the sample of our weak point. All of our people do the same way but different idea. So that pls cooperate each other and discuss, dialogue & try to get the best solution. Dont waste the time n its disappear the ambition by argue each other. Pls be gentle as Mr Obarma and Ms Clinton. Sorry for about it n I'm not mention who is right or wrong. Thanks for this comments
ငထုံဆိုတဲ့လူ ဆဲတာပဲတတ်ပုံ ရတယ်။
Me too. I really don't understand what is their point.
Everything got reason..
Try to learn what is the reason..
Nothing happen because of nothing..
စင်္ကာပူရှိ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်. ကျနော်တို့ ဟာ စင်္ကာပူအစိုးရကို တိုက်ခိုက် နေခြင်းမဟုတ်ပါ.. ဗမာပြည်ရှိအာဏာရှင် စစ်အစိုးးရကို ဆန့် ကျင်တိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စင်္ကာပူအစိုးရကို ထောက်ခံသူမဟုတ်ပါ.. သူ့ နိုင်ငံမှာနေရင် သူနိင်ငံရဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရပါမယ်.. အရင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စင်္ကာပူ အတိုက်အခံပါတီရဲ့ အသုံးချခြင်းကို ဗမာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေ မသိမသာခံ လိုက်ရပါတယ်.. သူတို့ တွေ ဗမားအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်သွားတယ်.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂျပန်ကို မကြိုက်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ဖို့ အတွက်ဂျပန်ကိုပေါင်းသင်းတာ သတိရပါ.. စလုံး အစိုးရကို သွားဆန်ကျင့်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် မည်သည့် အကျိုးမှရမည်မဟုတ်ပါ.. ပထမပိုင်းမှာ စလုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးမှာ လာအသိမှတ်ပြု အားပေးပါတယ်.. နောက်ပိုင်း လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သူတို့ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေတော့ ကိုယ့်ဗမာတွေပဲ ပြသနာတက်ပြီး ဗီဇာ ပိတ်တာတွေဘာတွေ ခံကြရတာ.. ကျနော့် ပြောချင်တာက တက်နိုင်သလောက် စလုံးအစိုးရနဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ ပါစေနဲ့ .. (သူ့ မတရားတာ သူ့ုနိုင်ငံသား အများစုတောင် ငြိမ်ခံနေတာ) .ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ကြပါ.. ဘောင်အတွင်းလုပ်ရင် ဒီထက်ပိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဗမာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ ပိုရလာစရာရှိပါတယ်.. ဦးမဆောင်နိုင်ပေမဲ့ .. နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်အဖြစ်အမြဲ ကြိုးစားနေပါတယ်..
that is absolutely right! ko naing lin. But this stubborn ko paw will never know.
ကိုနိုင်လင်း၏ စေတနာကို နားလည်သော်လည်း ကျနော်တို့၏ ခံယူချက်ကို ကိုနိုင်လင်းအနေနဲ့ နားလည်ပုံမရသေးတဲ့အတွက် ရှင်းလင်းလိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ စင်္ကာပူအစိုးရကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်၊ တရားမှုတမှုအတွက်၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ဦးတည်ချက်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးဖြစ်သော်လည်း ကျနော်တို့ဟာ လက်ရှိအနေအထားအရ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ မတရားမှုတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေ တင်းကြမ်းပြည့်နေသော်လည်း အဝေးတလံမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှဟာ ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမမှီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မျက်မှောက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကိုတော့ မျက်စိမှိတ်နေမယ့်အစား တရားမျှတတဲ့ ဖက်က ရပ်တည်ရပါမယ်။
နောက်တချက်က စင်္ကာပူအတိုက်အခံက အသုံးချ၊ အမြတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွတ်စွဲချက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လို လုပ်လို့ စင်္ကာပူအတိုက်အခံအတွက် ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်များရှိပါသလဲဆိုတာ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ တကယ်ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားကြတဲ့သူတိုင်းဟာ အဲသည်အချိန်က နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာဟာ အတိုက်အခံမဟုတ်ဘဲ စင်္ကာပူအစိုးရသာဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။
နောက်တချက်က လှုပ်ရှားသူများအပေါ် စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ အရေးယူမှု။
မိတ်ဆွေထင်တာက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများကြောင့် အရေးယူတယ်လို့ ထင်ဟန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကလည်း မမှန်ပါဘူး။ အဲသည်မတိုင်ခင် ၂ နှစ်ခန့်ကတည်းက အိုးဝေ(စင်္ကာပူ)ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို စင်္ကာပူအစိုးရက မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်ရုံမက ဗီဇာလက်နက်ကို အသုံးပြုဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲသည်အချိန်က နေထိုင်ခွင့် ဘယ်သူမှ မကုန်သေးလို့ အရေးယူလို့ မရခဲ့ပေမယ့် အချို့အတန်ငယ် ပတ်သက်မှုရှိသူများကို ပတ်စ်အသစ်လျှောက်တဲ့အခါ အလွယ်တကူချမပေးခဲ့တာ သာဓကတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိုးဝေနဲ့ နီးစပ်မှုရှိသူများကို အိုင်စီအေမှာ သီးသန့် အင်တာဗျူးတွေ ခေါ်မေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ် အားလုံးကို မေးမြန်းပြီး ယူထားတဲ့ စာရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အင်တာဗျူးမေးခံရသူတွေက အင်တာဗျူးမသွားခင်ကတည်းက ဘယ်နာမည်တွေကို ပေးလို့ရသလဲမေးမြန်းပြီးမှ သွားတာပါ။ ကျနော်တို့ကလည်း ဘာမှ ကွယ်ဝှက်စရာမရှိတဲ့အတိုင်း သူတို့သိတဲ့အတိုင်း ပြောခဲ့ဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဘောင်ထဲကသာ နေရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့မှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အခု စပီကာကော်နာမှာ ဆန္ဒပြခွင့်ရတာတောင် အရင်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား လှုပ်ရှားသူများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်လိုတဲ့အတွက် ပေးလိုက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ မြန်မာတွေကို ပါဝင်ဖို့ ဖိအားမပေးပါဘူး။ ဒါက နိုင်ငံသားတာဝန်နဲ့ မဆိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူသားတာဝန်ဝတ္တရားလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဘာသာ စိတ်သဘောတူညီသူတွေ စုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ တခြားမြန်မာလူမျိုးတွေ သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ ပါဝင်ရင်လည်း မတားပါဘူး။
အဓိကကတော့ တရားမျှတမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ နိုင်တဲ့ဖက်က တိုက်ခြင်းပါ။ အဲသည်အတွက် စင်္ကာပူအစိုးရက အရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်း အဲသည်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ အသင့်ရှိပါတယ်။
ဒီစကားမျိုးကို ကိုနိုင်လင်းတယောက်သာ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်အမတ်တယောက်နဲ့ အခြားထင်ရှားသူ တယောက်ကလည်း ပြောဖူးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ချက်အရ လက်မခံပါဘူး။